Mapato Ogadzirira Sarudzo Dzekutsvaga Achaamirira Musarudzo Gore Rino
Gadziriro yesarudzo muZimbabwe yasvika padanho repamusoro soro apo mapato makuru anopikisa achisimbaradza gadziriro dzichaitwa.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC-T, VaNelson Chamisa, neChishanu vakasangana nenhengo dzebato ravo mazana mana nemakumi matanhatu nevasere dziri kuda kupinda musarudzo dzema primaries muHouse of Assembly neSenate.
Musangano uyu wakaitirwa paJubilee Centre, Milton Park muHarare.
Bato iri rinoti riri kutarisira kunge rapeta sarudzo dzaro dzema primaries musi wa 12 Chivabvu pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa pakati paChikunguru naNyamavhuvhu.
Vachitaura pamusangano uyu, VaChamisa vakati bato ravo richakoshesa zvigaro zvemadzimai nevechidiki richivapa zvikamu zvavo zvakabvumiranwa. Vati vachapawo zvimwe zvigaro kune vakaremara.
VaChamisa vakati makanzura anoita zvehuori nekutuka vamwe acharambidzwa kukwikwidza musarudzo.
Vakasimbisawo kuti sarudzo yavo inenge yakanangana nekusimudzira vanhu vari kumaruwa uye vane chirongwa chinonzi Operation Gogoi Tisvikewo chakanangana nekukwezva vari kumaruwa kuti vavavhotere.
Bato iri rine musangano neMugovera paJonas Primary School kwaSeke, mumwe uchaitirwa kwaMubaira kuMhondoro nemusi weSvondo.
Vanoronga misangano yebato reMDC-T, VaAmos Chibaya, vanoti gadziriro yavo iri kufamba zvakanaka.
Zvichakadaro, bato reZanu-PF riri kutarisirwa kuita sarudzo dzaro dzema primaries nemusi weSvondo.
Kunyange hazvo bato iri range rati vanhu vose vari kutsvaga rutsigiro vafambe vose kuitira kuti vasapote vachikandirana makobvu nematete uye kuita zvetsvimbo mugotsi, kunetsana kuri kuenderera mberi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMashonaland East, Midlands, Masvingo nedzimwe vamwe vachinzi vari kuita zvemhirizhonga.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZanu-PF vachimirirawo Mazowe South mudare reparamende, VaFortune Chasi, vati vanenge vaita zvehunhubu vanosungwa asi vati zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Hurukuro naVaFortune Chasi
Mune imwewo nyaya, European Union inoti iri kuzotumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe gore rino mushure mekukokwa nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa.
EU yakaburitsa mashoko aya nemusi weChishanu zvichitevera musangano wakaitwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaSibusiso Moyo, nevanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano iri, VaFederica Mogherini, kuBrussels.
Aka ndekekutanga kuti EU iuye kuzoongorora sarudzo muZimbabwe mushure mekunge vaongorori vayo vadzingwa munyika muna 2002.